Literatiora – “video”: mizara fahalalana ho an’ireo te hanoratra i Hobiana | NewsMada
Literatiora – “video”: mizara fahalalana ho an’ireo te hanoratra i Hobiana
“Ny fikoloana ny zandry mpanoratra amin’ny alalan’ny takalo, tsy zava-baovao amiko akory fa efa fanaoko. Noho ny fihibohana, tsy afaka nanao izany intsony! Nitsiry ny hevitra…
… Ampiasaina ny facebook ka atao anaty “video” ny fomba izarana izany. Tato anatin’ny andro vitsivitsy, nizara fahalalana maimaim-poana momba ny literatiora i Hobiana. Lohahevitra maromaro miresaka ny tontolon’ny haisoratra no novoaboasany amin’izany. “Tsotra ny tanjona, ny hanampiana ny fahalalan’ny mpanoratra zandry, ankehitriny, momba ny literatiora hahafahan’ny rehetra mitrandraka kokoa ny talentany” hoy i Hobiana.
“Ny asasoratra kanto anefa tsy vitan’ny aingam-panahy sy talenta fotsiny fa ilaina tokoa ny fandalinana. Maro ny mangetaheta izany kanefa tsy mahita boky, tsy mahita zoky mba hifanakalozana hevitra. Moa tsy adidin’izay zoky efa nandia lalan-davitra ve ny mandavorary ny ezaka sy fikirizan’ireny tanora misandratra manana talenta sy otri-javakanto ireny? Eny no valiny raha ho ahy satria hasambarana ny mamaky asasoratra maharesy lahatra ny hakantony”, hoy izy..
Nampiroborobo fatratra ny firotsahan’ny tanora eo amin’ny sehatry ny haisoratra ny teknolojiam-pifandraisana, tato anatin’ny folo taona farany. Sabatra roa lela ihany izy io ka sady mahasoa no manapoizina. Maro ny aretina mifindra amin’ny tambajotran-tserasera « facebook » ka mahatonga rofy ny asa soratra sasany. Fakàna tahaka fahatany ny sanganasan’ny hafa, fisolokiana ny sanganasanan’olona, fivarotana sanganasa tsy an’ny tena, sns. Tsy vitsy kosa nefa ny tanora mahay mikolo ny hery fiarovany manoloana ireny aretina ireny. Inona moa no fanefitra fa tsy ny takalo sy fivelarana ihany? Ao ny vakiboky, dinidinika, atrikasa, … Mamantatra sy mamakafaka ny ataon’ny mpanoratra hafa eto an-toerana ka hatrany ivelany. Manorina ny an’ny tena manokana, toka-miavaka amin’ny an’ny sasany.